Albis Technologies သည် Access Solutions အသစ်ကိုခန့်အပ်လိုက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Albis Technologies ကချိန်းဆို Access ကို Solutions ၏နယူးဌာနမှူး
ဇူးရစ် - ဇန်နဝါရီ 30, 2015 - Albis Technologies ကကကုမ္ပဏီရဲ့ access ကိုဖြေရှင်းချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဘုတ်အဖွဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ဦးခေါင်းအဖြစ်အဲရစ်ဗန်တွင်း Heuvel အဖြစ်ခန့်အပ်တော်မူကြောင်းကိုယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ မိမိအအခန်းကဏ္ဍသစ်အတွက်, ဗန်တွင်း Heuvel ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး, အရောင်းနှင့် Albis Technologies က '' စီးပွားရေးလုပ်ငန်း access ကို, မိုဘိုင်း backhaul, လက္ကားနှင့် utility ကိုဖြေရှင်းချက်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကားမောင်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်များဖောက်သည် '' key ကိုလိုအပ်ချက်နှင့်စိန်ခေါ်မှုများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြောင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေး, အသုံးပြုသူ-friendly ထုတ်ကုန်ကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်၏ အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကုမ္ပဏီ၏ MetroIntegrator (TM) သည်ကွန်ယက်နှင့်ဒြပ်စင်စီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများဖြေရှင်းချက်စီမံခန့်ခွဲ; နှင့် Albis Technologies က '' 10 Gbit / s နဲ့အစုစုကိုအပေါ်သို့ချဲ့ထွင်ရန်။
"ဒါရိုက်တာကျွန်ုပ်တို့၏ဘုတ်အဖွဲ့တညီတညွတ်တည်းထုတ်ကုန်လိုင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတှေ့အကွုံကသူ၏ကျယ်ပြန့်အသိပညာအပေါ်အခြေခံပြီး access ကိုဖြေရှင်းချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူနစ်ဦးဆောင်လမ်းပြရန်အဲရစ်ကို ရွေးချယ်. ," ပတေရုသ Winkler, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Albis Technologies ကပြောခဲ့သည်။ "ရှေ့ဆက် Going, အဲရစ်ကျွန်တော်တို့ကိုသစ်ကိုစျေးကွက်စူးစမ်းကူညီပေးနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝင်ငွေစီးတိုးမြှင့်ကြောင်းဆန်းသစ်ဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။ "
မတိုင်မီက access ကိုဖြေရှင်းချက်၏ဦးခေါင်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရဖို့, ဗန်တွင်း Heuvel Albis Technologies က '' စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမန်နေဂျာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့် MetroIntegrator, ကုမ္ပဏီရဲ့ AccessIntegrator ကွန်ယက်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အဖို့ဆက်ခံဖွင့်အတွက်နျဆာပခဲ့သည်။ ထို့အပြင်သူကအများဆုံးမကြာသေးမီကအကြီးတန်းနည်းပညာဗိသုကာပညာရှင်အဖြစ်, Tele2နယ်သာလန်နှင့် Versatel Telecom ကုမ္ပဏီအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူး၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်လျှောက်လုံးအကြိမ်ကြိမ်အဓိကဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ ဗန်တွင်း Heuvel နည်းပညာတက္ကသိုလ် Delft မှသိပ္ပံမာစတာဘွဲ့ရှိပါတယ်။
"Albis Technologies ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏အရွယ်မှာနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော access ကိုဖြေရှင်းချက်ဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်စျေးကွက်အတွင်းလူသိများသည်," ဗန်တွင်း Heuvel ကဆိုသည်။ "ငါသည်အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆီသို့လက်လှမ်းဌာနခွဲလမ်းပြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
ဗန်တွင်း Heuvel တိုက်ရိုက်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှ Zurich နှင့်အစီရင်ခံစာများတွင်အခြေစိုက်လိမ့်မည်။
(Albis Technologies ကအကြောင်းwww.albistechnologies.com)
Albis Technologies ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း access ကိုတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပြီး မာလ်တီမီဒီယာ ကျယ်ပြန့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာမှဆက်သွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာန်ဆောင်မှုများပေးရန်ဖြေရှင်းချက် (အိုင်စီတီ) စက်မှုလုပ်ငန်း။ ဖောက်သည်တစ်ဦးရဲ့အတိအကျလိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီနိုင်သည့် Albis Technologies က '' အင်ဂျင်နီယာအရည်အသွေးနှင့်အနာဂတ်-အထောက်အထားဖြေရှင်းနည်းများ, မှတဆင့်ကုမ္ပဏီကိုဒီနေ့ရဲ့အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့အိုင်စီတီရှုခင်းအတွက်မရှိမဖြစ်သောယုံကြည်စိတ်ချရ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကိုပေးစွမ်းသည်။
အဆိုပါ Access ကို Solutions ဌာနခွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်း access ကို, မိုဘိုင်း backhaul, လက္ကားနှင့်ဝင်ငွေမြှင့်တင်ရန်အော်ပရေတာ '' ဝယ်လိုအားကိုက်ညီသောမိုဃ်းတိမ်ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြည့်စုံအစုစုကိုကမ်းလှမ်း, ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်နိမ့်တဲ့ operating ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်။ အဆိုပါ မာလ်တီမီဒီယာ ဖြေရှင်းချက်ဌာနခွဲတစ်ခုထက်သာလွန် End-user အတွေ့အကြုံကိုအာမခံကြောင်းခေတ်မီဆန်းပြား, high-performance ကို set-top box ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုခင်းကျင်းကမ်းလှမ်း IPTV နှင့် OTT န်ဆောင်မှု။
ဆွစ်ဇာလန်ရုံးချုပ် Albis Technologies ကကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက၎င်း၏ဖောက်သည်များ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း, အဆုံးအသုံးပြုသူများသည်။
Image ကို Link ကို: www.202comms.com/Albis/Albis-Technologies-Eric-van-den-Heuvel.jpg
Image ကိုစာတန်းထိုး: အဲရစ်ဗန်တွင်း Heuvel, Albis Technologies ကမှာ Access ကို Solutions ၏ဦးခေါင်း
Albis Technologies က အဲရစ်ဗန်တွင်း Heuvel 2015-01-30
ယခင်: အဆင်သင့်, သတ်မှတ်, Live! က Sky News, ပထမဦးဆုံး Inmarsat ကို Global Xpress®ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ထုတ်လွှင့်နေထိုင်ကြသည်။
နောက်တစ်ခု: ဒီဂျစ်တယ်ပုန်ကန်မှုသည် Professional ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက် Cloud-based Software Solution ကိုပူးပေါင်းရန်အဓိကနောက်ဆုံးသတင်းများကိုဖော်ပြသည်